XOG :Imaaraadka oo bilaawday dhaq-dhaqaaq ka dhan ah M/weyne Farmaajo | Nabadoon Online & Nabadqaad .com
XOG :Imaaraadka oo bilaawday dhaq-dhaqaaq ka dhan ah M/weyne Farmaajo
Feb 16, 2017	Share
Dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mida dowladaha faraha kula jira arrimaha Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaq lidi ku ah dowladda cusub durba bilowday.
Imaaraadka oo toddobaadkan heshiis ay saldhig milateri ku yeelanayaan magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya loo ansixiyay, ayaa dhinaca kale xiriiro toos ah la sameysay madaxda maamul goboleedka dalka.
Xogta la helayo ayaa sheegeysa in Imaaraadka looga yeeray madaxda maamul Goboleedyada dalka oo markan si kala danbeysa u tegi doona magaalada Dubai, halkaasoo ay kulamo kula yeelan doonaan saraakiisha Imaaraadka u qaabilsan Soomaaliya.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland C/weli Maxamed Gaas ayaa isla shalay gaaray magaalada Dubai, waxaana la sheegay inay qeyb ka tahay la-tashiyo ay la yeelaneyso madaxda maamul goboleedyada dalka sidii loo wajihi lahaa xaaladda cusub ee Soomaaliya gashay kadib doorashadii Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Imaaraadka oo markii hore olole ugu jiray inuusan xafiiska ku soo laaban madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lacag gaareysa 20 Milyan oo doolar ku bixiyay doorashadii madaxweynaha oo inteeda badan la siiyay Xasan Sheekh Maxamuud.